San Gennaro,Santo del giorno per il 19 settembre | Ilblogdellapreghiera
Akụkọ banyere San Gennaro
Amaghi ihe banyere ndu Januarius. Ekwenyere na ọ nwụrụ n'ihi okwukwe ya na mkpagbu nke Emperor Diocletian na 305. Akụkọ akụkọ na-ekwu na a tụbara Gennaro na ndị otu ya na anụ ọhịa bea na amphitheater nke Pozzuoli, mana ụmụ anụmanụ enweghị ike ịwakpo ha. E gbupụrụ ha isi ma mechaa weta ọbara Januarius na Naples.
"Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị nke ọkara juputara na iko iko anụ anọ nke anụ ụlọ, ma debe ya na okpukpu abụọ na katidral Naples dị ka ọbara San Gennaro, na-aquụ mmanya ugboro 18 n'afọ ... A na-etinye nyocha dị iche iche. , ma ihe ịtụnanya na-agbana nkọwa sitere n'okike ... "[Site na Catholic Encyclopedia]
A na-akpọ ya nkwenkwe Katọlik na ọrụ ebube nwere ike ịdaba ma bụrụ ndị a na-amata. Nsogbu na-ebilite, Otú ọ dị, mgbe anyị ga-ekpebi ma ihe omume ọ bụ ihe a na-apụghị ịkọwa akọwa ma ọ bụ ihe a na-apụghị ịkọwapụta. Anyị ga-eme nke ọma izere ikwere ihe n'ajụghị ase mana, n'aka nke ọzọ, mgbe ndị sayensị na-ekwukwa banyere '' puru omume '' karịa '' iwu '' nke okike, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya maka Ndị Kraịst iche na Chineke dịkwa "sayensị" ịrụ ọmarịcha ọrụ ebube ịkpọte anyị na ọrụ ebube kwa ụbọchị nke nza na dandelions, raindrops na snowflakes.
← Na post gara aga Gara aga post:Tugharia uche ugbua na otutu uzo Ekwensu puru isi wepu okwu Chineke
Ọzọ Post → Post ozo:Oziọma taa 19 Septemba 2020 na okwu Pope Francis